Home Wararka Kiiska Maxkamadda looga dacweeyay Fahad, Wadnaqabad, Kullane Jiis & Yasin Farey
[AKHRISO] Kiiska Maxkamadda looga dacweeyay Fahad, Wadnaqabad, Kullane Jiis & Yasin Farey
MOL ayaa heshay warqad uu garyaqaanka reerka dhalay Ikran Tahlil Faarax uu u diray Maxkamedda taasoo looga codsaday in aay maxkamadda wareysato eedeysanayaasha loo haysto maqnaashaha iyo dilka Ikraan Tahliil Faarax.
Waxaa maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida oo aqbashay qabashada dacwad Hooyo Qaali Maxamuud Guhaad uu garyaqaankeeda ka codsaday in baaritaan lagu sameeyo afartaas shaqsi ee aay ku maqantahay Ikraan Tahliil Faarax.
MOL ayaa loo sheegay in Fahad Yasin iyo Madaxweynaha Muddo xileedkiisa dhammaaday aay ku amreen Maxkamadda Ciidamada in aanay baari karin kiiska Ikraan, taasoo keentay in Hooyada dhashay Ikraan aay u qeylo dhaansato shacabka Soomaaliyeed.
Kaddib markii reerka aay ka dhalatay Ikraan ay magaalada Beledweyne ku afduubteen seddex qof oo ku hayb ah Fahad Yasin ayaa kiiska waxa uu noqdo midka cirka gala, taasoo ugu danbeyntii uu Rooble ballan qaaday in caddaalad loo helo Ikraan iyo Hooyadeed.
Fahad Yasin ayaa ku amray in Warbaahinta Qaranka aay qorto in Ikraan aay dishay kooxda Al Shabaab, taasoo maalin kaddib aay beeniyeen Shabab in wax lug ah ku leeyihiin dilka iyo maqnaashaha Ikraan.
Halka Hoose ka akhriso Kiiska loo gudbiyay Maxkamadda Ciidamada ee Ikraan Tahliil Faarax.